Akwụkwọ akụkọ bụ Semalt Sobre Cómo Llevar bụ Cabo La Reutilización Del Contenido
Crear na-ezigara gị na ebe nrụọrụ weebụ na-achọpụta ihe SEO. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe, reutilizar contenido antiguo aumentará su ranking de SEO. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọzọ ọ na-eme.
Ihe omumu nke Semalt , Frank Abagnale na-akọwa los factores cruciales que uno na-atụgharị anya na nke a.
1. Iji HTML5
1. Cheta na ọ bụrụ na ị na-ahụ maka mgbasa ozi nke mbụ. Nweta ihe ndị ọzọ nwere ike ịhapụ a mantenerte concentrado na laser SEO anteriores. Basándose en esta experiencia, ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-aga ahịa, eligiendo el canal de marketing adịghịs adecuado. Hay muchas herramientas automáticas que pueden ayudarle a analizar metricas de negocio n'oge a na-agafe agafe. Ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe ọ bụla dị mkpa, ị ga-achọpụta ihe ndị dị mkpa.
2. Mmetụta Na-edozi Anya
2. Ndị ahịa nke onye ahịa na-adọrọ mmasị. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche echiche banyere ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla. Nke a na-eme ka ọ bụrụ ihe ga-eme ka ọ bụrụ ihe ga-eme ka ọ bụrụ ihe ga-eme ka ọ bụrụ ihe ọ bụla. Nke a nwere ike ime ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ dịghị onye ọ bụla n'ime ndị ahịa nke ahịa. El repurposing deluxe nwere ike ịmepụta nsogbu dị iche iche nwere ike ime ka ọ dị mma.
3. Ihe ndị ọzọ na-eme ka anyị na-eche echiche banyere ihe ndị ọzọ bụ eziokwu. Nke a nwere ike ịdabere na nke na-eleta anya na centrados en el sitio web, nke a pụtara na ọ na-adịgide adịgide. Ị nwere ike ichebara ihe ọ bụla na-eme ka gị na ebe nrụọrụ weebụ na-ahụ maka ndị nleta. Tiene mucho que ver con el diseño web y también. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ị na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-elekwasị anya na web site. Ọ bụrụ na ị na-eme ka gị na ndị ọzọ na-arụ ọrụ site na UX site n'ịntanetị, ọ ga-abụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ị na-aga.
4. Keywords ngwa
4. Gụkwuo ihe ọmụma banyere ndị na-agụ akwụkwọ. Ozi na ozi ọma nke ndị na-eme ka a na-edebere aha na-eme ka a na-ele anya na onye ahịa nke ahịa. Puede pedir opiniones individuales y puntos de vista para que sea beneficioso para los ajustes necesarios. Ọ bụrụ na ị na-eche, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na anyị na-eme ka anyị na ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla na-eme ka anyị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na anyị na-eme ihe ọ bụla.
5. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe, ị nwere ike ịmepụta ihe na-akpali akpali ma ọ bụrụ na ị na-akwado ya. Ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ihe ọ bụla mara mma. Ọ dịghị ihe ọzọ na-eme. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị na-eche banyere ihe ndị dị mkpa, dị ka otu n'ime ihe onwunwe, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla. Ị nwere ike iri ten las las fechas actualizadas. Siguiendo bụos sencillos pasos, el contentido antiguo permanecerá perenne. Además, bụ ndị na-agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe na-aga n'ihu.
Tan pronto na-echekwa ihe ndị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ndị dị mkpa ma na-echekwa ọdịnaya, na-echekwa na ọ bụ ihe dị mkpa na muchas razones. Nke a bụ isi nke na-eme ka a na-eme ihe na-eme ka a họọrọ site na SEO ogo. Ignorar los comentarios anteriores es un gran error, que puede réducir muchos esfuerzos. Ọ bụrụ na ị na-achọ, ị ga-achọpụta ihe ọ bụla dị mkpa maka ọdịnihu Source .